Doka Vintage dia mampiseho marika ara-teknika malaza toa tsara | Famoronana an-tserasera
Ny tena marina dia hevitra iray hakana an'io karazana io Doka taloha tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-XNUMX hampiroboroboana ny marika teknolojia ankehitriny toa ny Fitbit na ny PlayStation 5. Tsara be ny endrik'izy ireo ary ny tsirairay amin'izy ireo dia mety ho anisan'io lalao io ihany koa izay mahafantatra tsara ny filalaovana tsara an'io "vintage" io. Miresaka momba ny saga Fallout an'i Bethesda isika.
Afisy afrikanina ho an'ny marika malaza izay afaka namily ny lafin-javatra sasany tamin'ny fiainantsika, toy ny fanaraha-maso marina tamin'ny fotoana nandraisana ireo dingana rehetra, ny fihinana kaloria ary ny kilometatra nandeha.
Uswitch dia nanokana fotoana hamoronana sanganasa enina miavaka izay ahatongavan'ireo orinasa niomerika ireo ny endrik'izy ireo. Tsy vitan'ny hoe manana ny PlayStation 5 an'ny Sony na ny fitbit azo ampiasaina Fitbit, fa amin'ny iPhone na Hive.
El Doka iPhone Izy io koa dia mifanentana tsara amin'ny karazan-tsarimihetsika finday miaraka amin'ilay efijery lehibe amin'ireo fahitalavitra nibodo ny habaka tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Fanaka fahita firavaka izay toa tena tsara ao amin'ireto doka ireto izay ahitanao ny olona manana io fitafiana io manokana.
Raha manana an'izany isika fahitalavitra goavambe, fiheverana ny taovolo volo avy amin'ny sarimihetsika toa ny Grease ary toa noraisiny ho loharanom-aingam-panahy izany. Manana ny fanambarana izahay ao uswitch hahafahanao misintona azy ireo amin'ny habeny feno ary te hampiasa azy io ho toy ny fototra ao amin'ny findainao; eny, aza adino ireo Fiorenana virtoaly an'ny Studio Ghibli ho an'ny Zoom.
Lehibe naroson'i uswitch mba hamoaka ireo dokam-barotra fahagola 6 izay ny marika fantatry ny rehetra no fototry ny mahafinaritra ny andro bebe kokoa. Aza adino ity Fampianarana momba ny fampiharana ny vokatra taloha amin'ny Adobe Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Marika teknolojia misy doka toa azy ireo tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX